Ururka SYSA & Ha’yada Handcape oo Garowe ka bilay wacyi galinta HIV/AIDS & Baritaankiisa+Sawiro – SBC
Ururka SYSA & Ha’yada Handcape oo Garowe ka bilay wacyi galinta HIV/AIDS & Baritaankiisa+Sawiro
Ururka Maxaliga ah ee SYSA oo ka shaqeeya waxbarashada iyo Dhaliyarada ayaa maanta ka bilabay baritaan iyo wacyi galin ku saabsan Cudurka HIV/AIDSka iyagoo gacan ka helaya Ha’yada Hand cape international.
Goobaha ay sida gaarka ay u tagayaan ayaa waxaa ka mida ururkaani Xafadaha Magalada Garowe, xeryaha barakacayasha iyo goobaha dhalintu isugu timaamado, waxaana maanta ay barnaamij balaaran ay ka bilabeen Dugsiga Fasamada gacanta halkaas oo ay ku jiraan dhalinyaro laga keenay qar ka mida Gobolada iyo degmooyinka Puntland kuna baranayaan xirfado kala duwan oo ay ku shaqaystaan.
Waxaana ka soo qayb galay Masuuliyiinka ka kala socday Handcape International Ha’yada PAC, UNAIDS UNICEF IOM iyo Masuliyiin ka socday Wasarada waxbarashada, oo dhamantoodba qiray un uu barnaamijkaani yahay in bulshada u wanagsan dhanka caafimaadkooda in ay ogaadaan loona bahan yahay in la dardargaliyo.
Dr C/raxmaan Siciid Maxamuud dhaga wayne oo ah Agaasimaha ha’yada u qabilsan Puntland wacyigalinta iyo ka hortaga ayaa sheegay in dhalinyaradu ay ka feejignada Cudurada halista si ay u noqdaan kuwa mar walba ka badbaada.
Masuuliyiinkta kale oo ka hadlay goonta oo aad u badnaa ayaa sheegay in loo bahan yahay in la dhirigaliyo barnaanijka noocan oo kale ah Gudoomiyaha Ururka SYSA oo waday hawlahan Caduur Adan Caduur ayaa tilmamay in ay horay u soo wadeen wacyigalintaan hada la si wadi doono.
C/samad Dheeliyo oo ah Madaxa Ha’yada Handcape International oo ka saacidayey fududaynta Hawlahan Ururka SYSA ayaa sheegay ay ka rajaynan in uu noqdo mid mira dhalay Barnamikaani.
Aktoober 5, 2011 at 7:52 am
war dhibta ka daaya ummadda aad mashruuca fidinta HIV/AIDS ee aad ku faafinaysaan dadka ,idinkoo isticmaalaya khayaano .